XOG: Shan Laacib Oo Usoo Wada Ciyaaray Arsenal & Juventus Iyo Halka Uu Aaron Ramsey Ka Geli Doono Silsiladda Xidhiidhsanayd Illaa 1999-kii – Page 2 – Cadalool.com
Waxa uu ahaa mid ka mid ah xiddigihii khadka dhexe ee ugu wanaagsanaa caalamka, isla markaana baal dahab ah kaga jira taariikhda Arsenal. Waxa uu ahaa laacib khadka dhexe oo dhan ka ciyaara min goolkiisa illaa goolka kooxda kale, wuxuu ahaa mid jidh ahaan xooggan, dheer oo baaskiisa aanay cidina dhexda ka goyn karin, si guul lehna u gaadhsiiya halka uu ugu talo galay. Waxa uu ahaa kabtanka Arsenal ee cid walba tusaalaha u ahaa marka la eego qaabkiisa hoggaamineed, waxaana laysku raacsan yahay inuu yahay xiddigii khadka dhexe ee dambe ee ugu wanaagsanaa taariikhda.
Patrick Vieira waxa uu u ciyaaray Arsenal sannadihii u dhexeeyey 1996 illaa 2005, waxaana uu u saftay 406 kulan oo uu u dhaliyey 34 gool. Waxa uu udub dhexaad u ahaa saddex horyaal Premier League oo ay Arsenal ku guuleysatay intii uu u ciyaarayay, waxaana lagu daray koobkii tobanka sannadood ee Premier League.
Sannadkii 2005 ayaa uu ka dhaqaaqay Arsenal, waxaanu tegay Juventus oo uu hal xili ciyaareed u saftay ka hor intii aanu u dhaafin Inter Milan.
Xili ciyaareedkii uu Vieira joogay Arsenal, waxa uu ka garab ciyaaray Alessandro Del Piero iyo Fabio Cannavaro, waxaanu saftay 42 kulan oo uu u dhaliyey 5 gool, laakiin nasiibku ma siinin inuu wax koob ah la qaado.